Home Wararka Maxa ka soo baxay kulankii Shirkadaha diyaaradaha & Al Shabaab. Lacag...
[XOG] Maxa ka soo baxay kulankii Shirkadaha diyaaradaha & Al Shabaab. Lacag intee ah ayaa lagu qoray?
Waxaa markii sadaxaad uu kulan qarsoodi ah dhex maray wakiilada shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala Garoonka diyaaradaha Adan Cadde ee magaalada Muqdisho iyo ururka Al Shabaab.
Shirkadahaan oo isugu jira kuwo caalami ah iyo kuwo gudaha ah ayaa looga yeeray degaanka Tora Bora oo ka tirsan Gobolka Shabeelada Hoose. Qaar kamida wakiilada Shirkadaha Caalamiga oo isku dayay in ay ka dhaga adeegaan amarka Ururka Al Shabaab ayaa cabsi darteed markii danbe iska xaadiriyay maxkamadaha ururka Al Shabaab.
Sida MOL ay xogta ku heshay Wakiilada Shirkadaha diyaaradaha ayaa habeen la soo jiifiyay deegaanka aay ka taliyaan ururka Al Shabaab iyadoo halkaas amar laga soo siiyay.
Shirkadaha Caalamiga ayaa lagu qoray lacago aad u badan oo ay tahay in ay bishii bixiyaan. Laakiin Wadahadal ka dib laga Yareeyay lacagta waxaana lagu qoray in ay bishii bixiyaan lacago u dhaxeeyo $4,300- $5,200 halka sanadkiina laga rabo in ay bixiyaan Zako caam ah oo cadadkeeda gadaal looga soo sheegi doono.
Ma aha markii u horeeysay oo ay Al Shabaab lacag ka qaadaan shirkadaha diyaaradaha laakiin markaan waxa ay ku soo rogeen amar culus oo hadii ay diidaan dhibaato ay kala kulmi doonaan duulimaadka ay ka sameeyaan Soomaaliya.
Shirkadaha lacagta bixiyay ayaa kala ah:
Qatar Airrways, Ethiopean Airline, Turkish Airways, Air Jabuuti iyo Ugandan Airways.
Shirkadahan ayaa baad Dhaqaale bixiya iyada oo dalka ay ka jirto dowlad sheegata in gacanta aay ku hayso amniga dalka. Waxaa iyagana lacag baada ka qaada ganacsata ururka daacish oo fadhigooda yahay Buuraleyda Galgala ee Puntland.